प्रदेश सरकारले नै भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गरिरहेको होला त ? (अडियो सहित) – Online Jagaran
सुर्खेत, २९ फागुन (जागरण) । कर्णाली प्रदेश सभाका सदस्यहरुले प्रदेश सरकारले भ्रष्ट्राचारीलाई संरक्षण गर्ने गरेको आरोप लगाएका छन् । कर्णाली प्रदेश सभाका अधिकांश सदस्यहरुले सरकारले भ्रष्टाचारीलाई पोसिरहेको आशय व्यक्त गरेका हुन् ।
प्रदेशसभा सदस्यहरल विकासे हरेक योजनामा स्थानीयतहका विकास विरोधी, अबसरवादी, गिरोह र भ्रष्टाचारीहरु सक्रिय भएको बताएका हुन् । यसै सन्दर्भमा हामीले प्रदेश सरकारले भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गर्ने गरेको कर्णाली प्रदेश सभाका सदस्यहरुको भनाई तपाइलाई कस्तो लाग्यो ? भनेर जनतालाई सोधेका छौँ ।
सान्नी त्रिवेणीका ७० प्रतिशत काम सम्पन्न (अडियो सहित)
एसिया इलाभेन र विश्व इलाभेन बीचको प्रतियोगिता स्थगित
१ श्रावण २०७७, बिहीबार ०६:३२ July 16, 2020 जागरण